प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण : शिक्षण अस्पतालको पछिल्लो अपडेट - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण : शिक्षण अस्पतालको पछिल्लो अपडेट
March 4, 2020 March 4, 2020 GRISHI232
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार दोस्रो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिँदै छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा केहिबेरमा शल्यक्रिया हुँदैछ। बिहान ९ बजे सुरु हुने भनिए पनि सवा १० बजे प्रधानमन्त्रीलाई शल्यक्रिया कक्षमा लगेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्गाले जानकारी दिए । त्यसअघि उनले चिकित्सकहरु परामर्श रहेको बताएका थिए । शल्यक्रिया सम्पन्न गर्न ४ देखि ५ घण्टासम्म लाग्ने डा. उत्तम शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एनेक्स मेडिकल वार्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राखिएको छ। अस्पताल र आसपासमा बुधबार बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ । अस्पतालका छतमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् ।
अस्पताल बाहिर नेकपाका नेता कार्यकताहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारणमा निकै कौतुहलता देखिन्छ ।
ओली रहेको मेडिकल वार्डसँगै आफ्ना बाबुलाई उपचारका लागि राखेका काभ्रेका रत्नसिंह तामाङले अहिले त्यहाँ आवतजावत निकै बाक्लो भएको जानकारी दिएका छन् । टेलिभिजनमा देखिने गरेका नेताहरु त्यहाँ आएको देखेको तर आफूलाई नाम भने थाहा नभएको तामाङले बताए।
शल्यक्रियाका लागि डा.प्रेम ज्ञवालीको टोली र डा. उत्तम शर्माको टोली तयारी अवस्थामा छ । एक टोलीले दाताकोे शल्यक्रिया गर्ने र अर्काे टोलीले प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया गर्नेछ ।
जघन्य अपराधका मुद्दा बाहेक आधा कैद मिनाहा हुने
May 4, 2019 February 8, 2021 GRISHI
September 23, 2020 September 23, 2020 News Desk